မေမေတို့ရဲ့ ကလေးငယ်တွေ နို့အန်တာဘာကြောင့်လဲ? -
မေမေတို့ရဲ့ ကလေးငယ်တွေ နို့အန်တာဘာကြောင့်လဲ?
နို့အန်တယ် ဆိုတာ ကလေးငယ်လေးတွေမှာ အဖြစ်များတဲ့ ကိစ္စရပ်တစ်ခုပါ။ ရင်သွေးတွေဆိုတာ မိဘတိုင်းရဲ့အသည်းနှလုံးမို့ ကိုယ့်ကလေးလေးက နို့တိုက်တိုင်း အန်နေတယ်ဆို မေမေတို့ စိတ်မှာ ထိတ်လန့်စိုးရိမ်ကြမှာပါပဲ ။
ကိုယ်ကလေးမှာ ရောဂါတခုခုရှိနေပြီလား…နို့တိုက်တိုင်း နို့အန်နေတော့ အာဟာရများပြည့်ဝပမလားဆိုပြီး စိတ်ပူကြမှာပါပဲ ။
အဲ့အတွက် မေမေတို့အတွက် ကလေးနို့အန်တာ ဘာလို့လဲ …နို့အန်ရင် ဘယ်လိုဂရုစိုက်ရမလဲ ဆိုတာတွေ သိချင်ရင် ဒီစာစုကို သေချာဖတ်ပေးပါနော်။
ပထမဆုံး အနေနဲ့ နို့အန်တာနဲ့ အန်တယ်ဆိုတာ ကွာပါတယ်။ ကျမတို့က နို့အန်တာကို Possetting or reflux လို့ခေါ်တယ်။ အန်တာကိုတော့ Vomiting လို့ခေါ်တယ်။ အဲ့နှစ်ခု မတူပါဘူး။
နို့အန်တယ်ဆိုတာ နို့တိုက်လိုက်တာနဲ့ ခဏနေဆို နို့ပြန်အန်တယ်။ မျိုချလိုက်တာနဲ့ နို့တွေပြန်ထွက်လာတယ်။ နို့အန်တဲ့ ကလေးက လန်းလန်းဆန်းဆန်းပဲ…နို့ဆက်စို့နိုင်တယ်…ငိုလဲ မငိုဘူး။ နောက်ကြာတဲ့အချိန်မှာ အလေးချိန်ကျသွားတာလဲ မရှိပါဘူး။
အန်တယ်ဆိုတာ ကလေးကနို့တိုက်ပြီး အချိန်တော်တော်ကြာမှ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အရောင်ကလဲ အစိမ်း၊ အဝါလေးတွေဖြစ်နေတယ်။ ကလေးက နုန်းသလိုလဲဖြစ်နေတတ်တယ်။
နို့အန်တာဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲဆိုရင် ကလေးငယ်ရဲ့ အစာခြေလမ်းကြောင်းဟာ လူကြီးတွေလို ကောင်းကောင်းမဖွံ့ဖြိုးသေးလို့ပါ။
ကလေးငယ်တွေက 6ပတ်ကစလို့ နို့အန်တတ်ပါတယ်။ 4-6 လနောက်ပိုင်းက စလို့ အစာခြေစနစ်တဖြည်းဖြည်းဖွံ့ဖြိုးလာပြီးနောက် နို့အန်တာ နည်းသွားတတ်ပါတယ်။
နောက်ပိုင်းမှာ သူ့အလိုလို သက်သာပျောက်ကင်းသွားတတ်ပါတယ်။ တချို့ကတော့ 1နှစ်- 1နှစ်ခွဲထိ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
ကလေး လေနာနေတာ၊ လေခံနေတာ
ကလေးတယောက်က 2-3 နာရီလောက်ဘယ်လိုမှ ချော့မရပဲ ငိုနေတဲ့ အချိန်မှာ ကလေးဗိုက်ဆာတယ်ထင်ပြီး နို့တွေအတင်းတိုက်တတ်ကြပါတယ်။ အဲ့အချိန်မှာ ကလေးက ရုန်းကန်ပြီး နို့တွေပြန်အန်တတ်ပါတယ်။ အဲ့တာဆို ကလေးကို လေထုတ်ပေးပါ။ နို့တိုက်ရင် ခေါင်းထောင်ပြီး အနည်းငယ် မတ်တဲ့ အနေအထားမှာ တိုက်ပေးပါ။ နို့ဘူးတွေ ဟာ လေပိုခံတတ်ပါတယ်။ အဲ့အတွက် နို့တိုက်ပြီးတာနဲ့ လေထုတ်ပေးတဲ့ အကျင့်လုပ်ပေးပါ။
ရုတ်တရက်လန့်သွားတာကြောင့် ငိုရင်း နို့အန်တာ
ကလေးက နို့သောက်ကောင်းနေတဲ့ အချိန် အသံတစ်ခုခုကြောင့် လန့်သွားတဲ့အချိန်၊ ကားမူးနေတဲ့အချိန် နို့အန်တယ်၊ နို့တွေ နှာခေါင်းထဲဝင်တော့ မွှန်ကုန်ရော။ အဲ့လိုအချိန်ဆို ကလေးက ပက်လက်ကြီးဖြစ်နေရင် ခေါင်းထောင်ပေးလိုက်ဖို့ လိုပါတယ်။ 4လ အောက်ကလေးတွေက ခေါင်းမထောင်နိုင်သေးတော့ ပိုဖြစ်တတ်ပါတယ်။
အစာတွေ နို့တွေအများကြီးကျွေးလိုက်မိတဲ့ အခါ
အမေကတော့ အစာများများဝင် များများထွားအောင် နို့တွေတိုက်၊ ကလေးကလဲ ဆာဆာနဲ့ အငမ်းမရစို့လိုက်တဲ့အခါ နို့တွေ အရမ်းများပြီး ပြန်အန်တတ်ပါတယ်။ အဲ့လိုမဖြစ်ရအောင် ကလေးကို နို့တိုက်ရင် နည်းနည်းစီနဲ့ ခဏ ခဏ တိုက်ပေးပါ။2-3 နာရီခြားတခါ နို့တိုက်ပေးလို့ရပါတယ်။
အစာမကျွေးခင် ကလေးအနှီး၊ အတွင်းခံလဲပေးပါ။ အစာကျွေးပြီးမှဆို ကလေးဗိုက်ကို ဖိမိသလိုဖြစ်ပြီး ပြန်အန်တတ်ပါတယ်။
နို့တိုက်ပြီး ကလေးကို 15 mins လောက်မတ်မတ်ထားပေးပါ။ မှောက်ထားတာမလုပ်ပါနဲ့။
နို့တိုက်နည်းမှန်ပါစေ။ ကလေးပါးစပ်နဲ့ နို့ကြားဟနေတာမဖြစ်ပါစေနဲ့။
နို့ဘူးတိုက်နေရင် နို့ဘူးအပေါက်ဝကျယ်နေတာမျိုးမဖြစ်ပါစေနဲ့။ အဝကျယ်ရင် နို့ရော လေရော အများကြီးဝင်သွားတတ်ပါတယ်။
ဘယ်အချိန်မှာ စိုးရိမ်ရမလဲ ?
ကလေး တောက်လျှောက်ငိုတယ်၊ စားသမျှ ထိုးထိုးအန်နေတယ်
အန်တာ သွေးတွေ အကျိအချွဲတွေပါလာတယ်
နို့စို့ပြီး 2နာရီလောက်ကြာရင် နို့တွေအစာတွေ အများကြီး အန်တယ် (အရောင်က နို့ရောင်မဟုတ်ဘူး၊ စိမ်းဝါနေတယ် သို့မဟုတ် ကော်ဖီရောင်ဖြစ်နေတယ်)
ခြေ၊ လက်တွေ ကောက်ကွေး၊ကျောတွေကော့နေတယ်
ဗိုက်ကလေး ဖောင်းလာတယ်၊ ထိရင်လည်း နာတယ်
အဲ့အချက်တွေ ရှိရင်တော့ ကလေးဆရာဝန်နဲ့ ပြသင့်ပါတယ်။
Dr. Erica (UM1)
Sep 14, 2021 Child Health, Health Tips
သွေးထွက်သံယိုအတွက် ATT ကိုဘာကြောင့်ထိုးခိုင်းတာလဲ?